Ntanị Kapeeti Kapeeti - China Nylon Carpet Tile Manufacturers, Suppliers
Ihe onyonyo nylon nwere PVC azụ-M&M
Emebere mkpokọta M&M maka ndị na-emepụta ejiji na ndị na-azụ ahịa.MM301 bụ isi awọ mara mma dị ka agba ntọala nke usoro ahụ zuru oke. MM301A, MM301B, MM301C na MM301D bụ 1-4 gradient site na isi awọ ruo na agba na-enwu gbaa. MM302-MM310 bụ agba siri ike a ga-eji dị ka ngosipụta nke nhazi ụlọ ahụ dum. Ngwakọta ha na -akwụghị ọnụ ga -eme ka ime ụlọ gị bụrụ nke na -enweghị njedebe n'ụdị dị iche iche.
A na-ejikọ mkpokọta Park Avenue nke 1-4 gradient kwa agba, nke ga-enweta ụdị ejiji na nke pụrụ iche ọbụlagodi na-enweghị enyemaka nke onye nrụpụta ọkachamara. Ntinye n'efu nwere ike mepụta mmetụta na -adịghị ahụkebe na ụdị ejiji.